အရောငျရငျ့မှတျတမျး – ၂၀၁၉ ဖဖေျောဝါရီ Bold news – Feb 2019 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောငျရငျ့မှတျတမျး – ၂၀၁၉ ဖဖေျောဝါရီ Bold news – Feb 2019
အရောငျရငျ့မှတျတမျး – ၂၀၁၉ ဖဖေျောဝါရီ Bold news – Feb 2019
Posted by kai on Feb 8, 2019 in Myanmar Gazette | 14 comments
Bold news - Feb 2019
မြန်မာ့ဂဇက် ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊( Vol 7/Issue2– No.122. 32 Pages, Printed in Los Angeles )
* မောင်လူပေရဲ့ ၀က်နှစ်ဗေဒင်* မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ မန္တလေးသတင်းစာဆရာကြီးဦးကြည်မြ* ဘလက်ချောတွေ့ဆုံတဲ့ ဂီတပညာရှင် ပက်ထရစ်* ဖေဖော်ဝါရီအလှပန်းအဖြစ် Shumawa Kyaw* တိမ်မည်းရေးတဲ့ စမတ်ဖုံးရဲ့ လျို့ဝှက်အစွမ်း ၂၁ခု* မောင်မိုးညိုရဲ့ ရေး..(၃)ရေး..* မသန္တာအောင် (ဆေးပညာဘွဲ့) ရေးတဲ့ ခန်းခြောက်ခြင်းရှိုးဂရင်းစ်ရောဂါစု (Sjogren’s syndrome)* လစဉ်ပါနေကျ ကာတွန်း၊ ဗေဒင်၊နေ့စဉ်မြန်မာ/ကမ္ဘာသတင်းဒိုင်ယာရီ၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ၊ တိုင်းရင်းဆေးကဏ္ဍ၊ ဆယ်လီဘရိတ်တီသတင်းများနဲ့အတူ..ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉ ထုတ် မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။မြန်မာစတိုးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးခန်းများ၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ..။
နိုင်ငံအခြေပြမိန့်ခွန်းတဲ့..။ သိသင့်တဲ့ ၅ချက်
5 key takeaways from Donald Trump’s State of the Union speech
Updated 10:19 AM ET, Thu February 7, 2019
(CNN)President Donald Trump delivered his State of the Union address Tuesday night,aspeech that was, in equal measure, surprisingly bipartisan and deeply divisive — reflective of the deep contradictions that sit at the heart of his presidency.
1. Trump started onabipartisan note, but …
2. Peace ≠ “partisan investigations”
4.The case foranational emergency on the border was made
5. The reaction shot story
WEATHERPublished January 30
Polar vortex causes Chicago River to ‘smoke,’ freeze as subzero temperatures hit
At the moment, temperatures in Chicago are lower than both Alaska and Antarctica. And signs of the bitter cold are all around — most notably surrounding the Chicago River, which is currently “smoking” and starting to freeze over while in the powerful polar vortex’s grip.
Aerial views of the Windy City revealalarge portion of the river is covered in chunks of ice and giving off swirling sea smoke, also known as “steam fog” when it occurs over freshwater lakes or rivers. However, it’s important to note that fog technically occurs when warm air meets cold water.
Leading liver transplant surgeon has warned Australians of the dangers of supplements, citing cases of liver failure caused by popular products such as Valerian and green tea extract.
February 5, 20193:46 PM ET
The Development Research Centre of the State Council paintsarelatively low profile role for China over the next two decades due to current economic slowdown
Reports released ahead of the trade talks between China’s Vice-Premier Liu He andaUS delegation led by Robert Lighthizer and Steven Mnuchin in Beijing this week
PUBLISHED : Tuesday, 12 February, 2019, 6:58pm
INTERVIEW WITH GENERAL U AUNG SAN – HEAD OF BURMESE DELEGATION John Parsons interviewing General U Aung San, head of the Burmese delegation to Britain for talks about Burmese independence. Close up shot of full face of U Aung San sitting at desk in London talking about his mission (natural sound).
John Parsons: From Burmese General, U Aung San, Head of his country’s delegation in Britain. Aung is giving this very important and compromising message.
Aung San: “My clients and I have come to London in response to the invitation of His Majesty’s Government. In order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand for what people want is to complete independence. And the thought of independence comes toaconstitutional assembly elected by the nationals of Burma. We want to help the international government with full of authority. We want also the people’s of what is called the frontier areas to help to have the same freedom with us simultaneously and join hands with us.”
John Parsons: Burma’s future may soon be in this man’s hands.
ကမ္ဘာကြီးက ရာသီတွေစွတ်ပြောင်း..( လူတွေတင်မဟုတ်.).ကမ္ဘာကြီးပါအစွန်းရောက်ပြီး.. ရှိကာဂိုမြို့မှာ မိုင်းန်ပ် ၅၀ ဖြစ်ချိန်..။ သြစတေးလျှပြည်မှာ..တောမီးလောင်ပြီး အပူချိန်တွေလှိမ့်တက်နေသမို့.. သြဇီတွေ ဒုက္ခတွေများ..။
အမေရိကားရဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကလည်း.. ကမ္ဘာ့ရာသီပြောင်းတယ်ဆိုတာ.. Troll အင်ကြီးပါ.. Fake news ပါပြောရင်း.. ပြောရင်း..ကွန်ဆာဗေးတစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး သမ္မတထရမ့်ကိုယ်တိုင်.. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) မှာလက်မှတ်ထိုးပါထားတဲ့.. ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ပြင်သစ်အက်ကော့ကပါ.. နှုတ်ထွက်..ခဲ့။
တကယ်တော့ ..လုပ်ခဲ့သမျှတွေက.. အခုလုပ်နေသမျှ.. ငါတို့ကလေးတွေအနာဂတ်..သူတို့တွေအနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးနေတာပါပဲ။ သူတို့မှာ..အချိန်ကျရင်.. ပြောင်းပြေးစရာ တခြားကမ္ဘာတလုံးလည်းမရှိ..။
အဓိကလုပ်ခဲ့..ဖျက်ခဲ့ကြတဲ့.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးစက်မှုနိုင်ငံများကလည်း.. တာဝန်ခံ..တာဝန်ယူမှုလည်းမရှိသလိုမို့.. အခုတော့.. ကလေးတွေထွက်ချ.. ဆန္ဒတွေပြနေပါပြီ..။ ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာနဲ့ပါ…။
ဒီလိုဖြစ်အောင်ပထမစ,လိုက်သူက..ဆွီဒရှ် ၁၅နှစ်သမီး Greta Thunberg ဖြစ်ပါတယ်..။ မနှစ်က စက်တင်ဘာ တရက်မှာ.. ကျောင်းပြေးပြီး အစိုးရရုံးပေါက်မှာ တယောက်ထဲသွားထိုင်..ဆန္ဒပြတာကနေ..အခုလိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ..။
မြန်မာကလေးငယ်များလည်း.. တတပ်တအား ပါစေလိုတဲ့အကြောင်း..။
ကလေးတယောက်နောက်မှာ..မိဘ ၂ယောက်ရှိတာမို့.. ကလေးတယောက်အားက.. ၃ယောက်အားလို့တွက်လို့..ရပါတယ်..။ အင်မတန်ကြီးတဲ့ ပါဝါ.. ပါ။
ဗီဒီယိုသတင်းအရ.. ၉နှစ်သမီး ဗြိတျှစ်လေးလဲ.. ပါဝင်ဟောပြော.. ဆန္ဒပြနေပါတယ်.. ဆိုတဲ့အကြောင်း..။
Students around the country walked out of schools to call on the government to declareaclimate emergency and take active steps to tackle the problem.
The action was part ofamuch wider global movement, known as Schools4Climate Action.
အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင်.. နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကျေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း..။
သမ္မတက.. သူ့အိပ်ဇက်ကတစ်ပါဝါနဲ့.. နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာကို (ကွန်ဂရက်လက်မှတ်မလို.. ) စိတ်ကြိုက်ထုတ်သုံးနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း..။
ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ တလကျော်ပိတ်သိမ်းတုံးကလည်း.. သာမန်ပြည်သူ အမေရိကန်တွေ.. သေသေချာချာတောင်မသိ..။ အစိုးရမရှိပဲ..အေးဆေး..အေးဆေး..။
အခု.. နိုင်ငံတော်ကြီး အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတော့လည်း.. အမေရိကန်တွေတုပ်တုပ်မလှုပ်..။
အကောင်းဆုံးအစိုးရဆိုတာ.. ရှိနေမှန်းတောင်မသိရအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အစိုးရဆိုတာမျိုးကြီးလားမသိ..။
နောင် ဒီမိုကရက်အစိုးရတက်ရင်..အိမ်ဖြူတော်က.. အရေးပေါ်ကြေညာ.. ဘဏ္ဍာတိုက်ဖေါက်..ငွေထုတ်သုံးတဲ့..ေ-ာက်ကျင့်ကြီးပါပြီး.. ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်( ဘက်ဂျက်ထုတ်ပေးသူ) ကို ကျော်ကျော်လုပ်ဖို့.. တလှည့် အခွင့်အလန်းပွင့်သွားပြီ… လို့..။
ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်တွေ..ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေ.. အလှည့်ကျမနွဲ့တန်းနော… တဲ့..။
သေနတ်လက်နက်..ထိန်းချုပ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်..။ ကမ္ဘာ့ရာသီအပြောင်းအတွက် ဥပဒေလုပ်ထုံးတင်းကြပ်စိစစ်တာတွေ..။ ၊ LGBTQ အခွင့်အရေး..။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးခံစားခွင့်တပြေးညီ..။ စသဖြင့်..အိပ်ဇက်ကတစ်ပါဝါနဲ့.. လုပ်ရမှာ..လုပ်ပေးရမှာ.. တန်းစီစောင့်နေတာတွေရှိပါတယ်.. တဲ့..။
Got “Fake Milk”?
၁၉၇၀ လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ် ၅၀လောက်ကတော့ အမေရိကားမှာနွားမွေးစခန်းကြီးတွေ ၆သိန်းခွဲရှိပါသတဲ့..။
အခုတော့.. ၄၀၂၁၉ ခု….။ ( စီးပွားပျက်ချက်..ကြမ်းပါ့ )
ဖြစ်ပုံက.. လူတွေက (အထူးသဖြင့်..) အမေရိကန်တွေက.. နွားနို့သောက်ရင်.. ဗိုက်နာတယ်.. ၀မ်းလျောတယ်..။ အလဂျီဖြစ်တယ်..။ ကယ်လ်စီယံနည်းတယ်.။ များတယ်..။ ပိုးသတ်ဆေးများတယ်.။နည်းတယ်..။ ကိုလက်စရောပါတယ်.. စသဖြင့်.. ဂျီကျနေကြတာပါ..တဲ့..။
အဲဒါကြောင့်.. ဆီလီကွန်တောင်ကြား.. အိုင်တီဒေသက.. Perfect Day Foods ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေ..Lab စမ်းသတ်ခန်းမှာ နို့အတုတီထွင်.. စက်ရုံကနေထုတ်လုပ်ထည့်လိုက်ပါသတဲ့..။
( နည်းပညာကြံ.. ခံနိုင်ရိုးလား.. )
အဲဒီ.. လူမကြိုက်တာတွေ ၊မတည့်တာတွေ.. တခုမှမပါတဲ့.. တိရစ္ဆာန်ကင်းလွတ်သော animal-free milk နို့ ပါတဲ့..။
အဲလိုနဲ့.. စက်ရုံထုတ်.. နို့ကုမ္မဏီတွေ အသီးသီးပေါ်လာသမို့.. တကယ်နွားနို့ထုတ် မွေးမြူရေးစခန်းတွေလည်း.. အလုပ်မဖြစ်.. စီးပွားရေးထိုးကျလာတာ.. ဆက်ကျဦးမှာပါ…တဲ့..။
နို့တုကနေ.. ထောပါတ်..။ ချိစ်.။ ဒိန်ချဉ် အကုန်ထုတ်လို့ရတာမို့.. အစစ်ထက်ကောင်းတဲ့ အတုလို့ခေါ်ရမှာပဲ..။
( အကြံတူ.. နောက်လူ သာစတမ်း )
တကယ်တော့.. US FDA က.. almond milk, soy milk, rice milk တွေကို ခွင့်ပြု.. ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးပြီးသားပါ…။ အခုလို..နွားနို့ချွတ်စွတ်.. စက်ရုံထုတ်နို့ကိုလည်း..animal-free milk ဆိုပြီးခွင့်ပြုထားပါသတဲ့..။
နွားအကောင်လိုက်မွေး.. ညစ်ထုတ်နေရတဲ့ နို့ထုတ်သူများက.. သူတို့နွားနို့ကို..
“ကျန်းမာသည့် တကယ့်နွား(တို့)မှညှစ်သည် ” “the complete milking of one or more healthy cows.”
အဲ.. မြန်မာပြည်က သက်သတ်လွတ်သမားများအတွက်လည်း.. သတင်းကောင်းပါ..။
ကိုရွှေ မြန်မာတွေဆိုတာက..သက်သတ်လွတ်.. အိန္ဒိယန်းချစ်တီးတွေဇာတိမျိုးရိုးနဲ့..၊ နွားမေတ္တာစာကောင်းမှုနဲ့….နွားသား.. ကျေးဇူးရှင်.. ဟိုးလ်လီးကောင်း.. မစားရတဲ့အထဲ.. မြန်မာသက်သတ်လွတ်က.. တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယန်းတွေ သက်သတ်လွတ်လိုမဟုတ်။.. နို့နဲ့နို့ထွက်ပါ..( အသက်ပါတယ်ဆို) ရှောင်နေကြတာ..။ အဟာရမပြည့်..။ မြန်မာကလေးတွေ..ခေါင်းပဲကျန်..။ ဗိုက်ကသန်နဲ့ပူ..။
( နွားမွေးခိုင်းပြီး.. နို့ထုတ် သောက်ခိုင်းနေတဲ့..သမ္မတကြီး..သမ္မတဟောင်းအကြီးကြီး.. . ကြားလား.. ကြားရလား.. )
To prevent consumers from becoming confused between regular milk and plant-based milk, dairy farmers are asking the FDA to enforce the definition of milk as “lacteal secretion from milking one or more healthy cows.”
There are just over 40,000 dairy farms in the U.S., down from 650,000 in 1970.Trevor Hagan / Bloomberg via Getty Images file
Feb. 19, 2019, 11:40 AM PST
The old question “Got milk?” hasacomplicated answer these days, because it all depends on what you mean by “milk.”
Consumers could soon be faced with confusion in the dairy aisle as they wonder if the milk they’re drinking came fromacow — or was made inalab.
Perfect Day Foods is one company creatingasynthetic milk alternative. It’s similar to milk in that it consists of casein and whey, the proteins found in milk. However,acow was never used to produce their product. Instead, the animal-free dairy product is made inalab using genetically engineered yeast programmed with DNA to produce the same proteins found in cow’s milk.
နောက်ဆို နွားအစစ်ထက် ပို သန်မာပြီးပြည့်စုံတဲ့
အသက်ဆိုတာ.. သက်ရှိဆိုတာ.. တိရစ္ဆာန်ဆိုတာ.. ဘာလဲ.. ဖြန့်ကျက်တွေးချင်စိတ်များ …မဖြစ်မိဘူးလား.. “k:
အမေရိကန် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာတွေ စပြီးလက်ခံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ အရွှေးခံရသူတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ခရီးသွားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ ရုပ်ရှင်အနုပညာကျောင်းမှာ ဇွန်လ ၁၆ ရက်ကနေ ၂၉ ရက်အထိ တက်ရောက်ကြရမှာပါ။
လျှောက်ထားဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ၂၀၁၉၊ မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ညနေ ၅း၀၀ နောက်ဆုံးထားပြီး RangoonUSECA@state.gov ကိုအီးမေးလ်ပို့ လျှောက်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
– စာလုံးရေ ၅၀၀ ပါဝင်တဲ့မိမိအကြောင်း
– လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒါမှမဟုတ် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုအကြောင်း စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်
– ယခင်က မိမိထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတိုကား ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ကြောင်းတိုအကြောင်း အွန်လိုင်းမှာကြည့်လိုရမယ့် လင့်ခ်
– ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုပြန်လည်မျှဝေမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မူကြမ်း
Listen up filmmakers! Applications for the American Film Showcase Documentary Workshop are now open. Participants will get the chance to travel to the United States and attend the University of Southern California School of Cinematic Arts from June 16 to 29.
Interested in applying? Submit the below to RangoonUSECA@state.gov by March 15, 2019 at 5pm.
• 500-Word Personal Statement
• 1-paragraph description of current documentary in research, development, or production phase
• Online link to previously produced short documentary or short narrative work
• Draft plan on how the participant plan to share back with the community
Oops! ကမ္ဘာကြီးစိမ်းဖို့.. အမေရိကန်တွေ သေပါပြီ..။ တအိမ် ဒေါ်လာ ၆သိန်းဖိုး ကုန်ကျစရိပ်တဲ့..။
ကွန်ဆာဗေးတစ် မီဒီယာ ဖောက်စ်သတင်းမို့.. ယုံစရာအပြည့်တော့မဟုတ်..။
GREEN NEW DEALPublished 11 hours ago
Green New Deal would cost up to $93 trillion, or $600G per household, study says
The unprecedented plan doesn’t come cheap, American Action Forum president Douglas Holtz-Eakin and his co-authors wrote in the study.
“The Green New Deal is clearly very expensive,” the study concluded. “Its further expansion of the federal government’s role in some of the most basic decisions of daily life, however, would likely haveamore lasting and damaging impact than its enormous price tag.”